Naxaas / Nickel Naxaas
Waxaan leenahay 4 shirkadood oo wada jir ah oo ay ka mid yihiin Aluminium, Copper, Brass & Nickel castings bronze –waxaan soo saarkeena inta badan soo saarnaa Aluminium, badeecada bamka biyaha laga soo saaro ee ku saleysan naxaasta, iyo qaar ka mid ah farsamada gacanta lagu sameeyo oo naxaas ah, oo sanadkii la soo saaro qiyaastii 400 tan. - Miisaanka badeecaddu wuxuu noqon karaa 0.05-100kg, cabirka ugu badan waa 800 * 800. Marka loo eego shuruudaha, maaddadu waxay la kulmi kartaa shuruudaha baaritaanka ROHS, saxsanaanta alaabooyinka wax lagu shubona waxay gaari karaan CT7-CT8. Iyada oo la adeegsanayo aaladda 'spectrometer', qalabka b ...
Waxyaabahayagu waxay soo saareen tayo sare iyadoo la adeegsanayo waxyaabo la isku halleyn karo, tikniyoolajiyad cusub, qalab farsameyn heer sare ah & xakamaynta nidaamka si adag. Maaddaama aan nahay hal shirkad oo horseed u ah saxda saxda ah, waxaan soosaaraneynaa qalabka soo socda: GB (CHINA), ASTM (US), DIN (GERMANY), JIS (JAPAN): 304.304l, 316,316l, 410, cf8.cf3, cf8m, 1.4301,1,4303, .4308,1.4404,1.4408,1.4581, SCS13, SCS14, SCS13A, SCS14A, WCB, C45, C20, C10,15Cr3,15CrNi6,16MnCr5,34CrMo4,42CrMo4,56, A3 ...
Hebei Metals & Engineering Products Company Ltd. waxaa la aasaasay 1974 waxaana dib u habeyn lagu sameeyay shirkad ay dowladdu leedahay oo loo beddelay shirkad gaar loo leeyahay sanadkii 2005. Waxaan nahay hormuudka dhoofinta dhoofinta ee gobolka Hebei, Shiinaha. Iyada oo leh 2 macdan oo gebi ahaanba leh oo leh tiro wada-hawlgalayaal taageero-wadaag ah oo muddo-maal-gashan ah ayaa la kulmaya baahida macaamiisha kala duwan ee wax-soo-saarka shubka (habka kala duwan & hannaanka shubista), mashiinka iyo dusha sare ee dusha iwm …… Iyada oo la adeegsanayo dawladda Shiinaha deegaanka pr. ..
Iyada oo leh 2 macdane oo wada leh oo leh tiro wada-hawlgalayaal taageero-wadaag ah oo muddo-dheer wada-shaqeeya ayaa daboolaya baahiyaha macaamiisha kala duwan ee wax-soo-saarka shubka (habka iyo hannaanka kala duwan ee wax lagu rido), mashiinka iyo dusha sare ee dusha iwm China Iyadoo la adeegsanayo siyaasadda ilaalinta deegaanka ee Dowladda Shiinaha , waxaan maalgashanay 20 milyan oo RMB ah oo kor loogu qaadayo xarumaha macdanta. In ka badan 30 sano oo alaab ah dhoofinta khibrad / tayo sare leh iyo koox QA farsamo adag / horumarin wada jir ah macaamiisha iyo ...